Unotonhorera Box, Outdoor Kayak, Fishing Kayak, Sup Board, Tsigira Paddle - Kuer
Iceking Nzvimbo Series I
Tarpon zvinokurudzira 10ft
Tarpon zvinokurudzira 13ft
Basic SNA Kayak
Papfungwa 1 + 1
Mira Up Paddle Board
Swivel Rod wokuisira
Chomumba tsvimbo mapedhi
Umbwa muna 2012 panguva mumhenderekedzo yegungwa nzvimbo Ningbo, China, Kuer Group akazvarwa kubva yokuti munhu wose akakodzera kuva yepamusoro broken-kuumbwa epurasitiki chigadzirwa. Kubva pfungwa iyi, isu yakatanga nemutsara dzinenge haufi broken-kuumbwa zvigadzirwa pamwe musoro mitengo. R & D wedu chikwata ane zvakawanda ruzivo makore 5-10 ari rotationally rakaumbwa epurasitiki zvigadzirwa. Kayaks uye No vari nokudada akafanoona, engineered, tooled, wakapedzeredzwa uye akasikwa Kuer Group. Zvino Kuer Group muridzi pezvitsiga matatu: kamhepo Kayak, ICEKING, KUER.
For kubvunza pamusoro zvinhu zvedu kana chikumbiro pricelist, tapota zadza kwako email kutisiya imwe shoko pamwe zvigadzirwa uchifarira. Ticharamba kudzokera kwamuri mumaawa 24.